Somaali Tahriibyaal ah oo shil ku galay Liibya – Radio Daljir
Somaali Tahriibyaal ah oo shil ku galay Liibya
Febraayo 15, 2018 7:24 b 0
inta la Xaqiijiyaay 23 Qof oo si sharci daro ah utahriibayay ayaa ku dhintay Dalka Liibiya kadib markii uu qalibmay gaari ay la socdeen oo Marayay Magaalada Bani Walid.
Dadka dhintay ayaa isugu jira Muwaadiniin udhashay dalalka Somaliya iyo Eritrean, Kuwaas oo usii socday Talyaaniga si ay uga sii gudbaan dalalka Kale ee Yurub.
Masuuliyiinta Isbitaalka Bani Walid Mohamed al-Mabrouk ayaa sheegay in dadka waxyeeloobay loola cararay Isbitaal 50Km ujira halka uu gaariga ku rogmaday, Waxaana dhaawac ah 78 Qof, Kuwaas oo 8 Kamid ah ay yihiin kuwo ay xaaladooda liidato.
“Isbitaalka Kuma arag Wadihii Gaariga , Mana garaneyno Waxa ku dhacay, Waxey ubadantahay Inuu badbaaday ama Halkan ayaa la keeni doonaa” ayuu yiri Mohamed al-Mabrouk oo ah Maamulaha Isbitaalka Magaalada uu shilka ka dhacay ee Bani Walid.
Waxaa kale oo ay qorayaan qaar kamid ah Warbaahinta gudaha ee Dalka Liibiya ayaa sheegaya in dhimashada haatan sii mareyso 23 Qof, Dhaawacana gaarsiisanyahay 100 Kale, Waloow Saraakiisha Caafimaadka ka hadlin.
Guddoomiyaha Gobalka Banaadir oo xaflad soo dhaweyn ah Muqdisho lagu qabtay
Qoysaaska dadkii ku wax yeeloobay qaraxii Zoobe oo deeq la gaarsiyaay (dhegayso)